FONJAN’ANTANIMORA: HO TSARAINA ALOHAN’NY 15 DESAMBRA AVOKOA NY GADRA TSY MBOLA VITA IZANY
On nov 1, 2019 8 365
Ndrl: Sary nalaina tamin’ny facebook Dadan’i Jemima Rivo Ralaivita
Nidina tampoka teny amin’ny fonjaben’Antanimora, omaly ny Filoham-pirenena Rajoelina Andry. Nivoitra tamin’izany fa henjehina mialoha ny 15 ny volana desambra ho avy izao ny fitsarana ny voafonja mbola tsy notsaraina mihitsy. Nilaza ihany koa ny Filoha fa tsy hanaiky lembenana amin’ny fanosihosena ny zon’ny voafonja sy ny fianakaviana izy. Tsy hilefitra amin’ny fanaovana kolikoly amin’ny famangiana eny an-toerana.
Nisy ny tafa sy dinika nifanaovany tamin’ny voafonja, izay nahalalana fa maro ny olona voatazona tsy ara-drariny, tahaka ny resaka « alika » maty. Mikasika izay indrindra, nisy ny fanambarana nataon’ny filoha amin’ fomba fiasa eny anivon’ny fitsarana : « tokony ho jerena akaiky ity resaka fampidirana am-ponja vonjimaika avy hatrany ity, na ny Mandat de dépôt systématique. Izany dia fijerena ny maha olona, sy ho fisorohana ny fahafenoana diso tafahoatra ny fonja« , hoy izy.
Tsiahivina, 4300 no isan’ny voafonja ao Antanimora, raha 800 ny isan’ny olona zakan’izany. Mahatratra 99 ny zaza tsy ampy taona ka tsy mbola voatsara ny 80 mahery. 450 ny vehivavy voatazona ao Antanimora, hatramin’ny omaly. » Mifanitsa-kitro, zara raha misy hatoriana. manginy fotsiny ny loto sy ny tsy fanjarian-tsakafo », hoy ny voafonja iray, nanontaniana. Manao antso avo, ho fanamafisana ny voalazan’ny Filoham-pirenena izy ireo, amin’ny hanafainganana ny fotoam-pitsarana.
Marihina fa hanome famotsoran-keloka faobe ny filoha, indrindra ho an’ olona efa nahavita sazy mihoatra ny 30 taona ka efa mahazo taona, torak’izany ireo voafonja latsaky ny herintaona saingy tsy nanao heloka be vava. Misy fepetra, ary miankina amin’ny ministeran’ny fitsarana ny fanaovana izany.
Hisy ny fampiofanana ny mpiandry fonja. Hampitomboana ny isan’izy ireo. Homena valisoa koa ny mpiandry fonja mendrika sy modely.
Nahavelombolo ny voafonja, nitondra fanantenana ho azy ireo ity fitsidihan’ny Filoha Rajoelina Andry, omaly ity.